त्यो डोजर आतंक ! – Nepal Japan
नेपाली समय : 02:51:07
जापानी समय : 06:06:07
23 October, 2019 09:15 | पत्रपत्रिका | comments | 11100 Views
डोजरले हुत्याउँदा दशरथचन्द–९ की गौरी जोशी घाइते भएकी छन्। सुन्नाखानबाट पार्स जोड्ने सडक खन्ने विषयमा सोमबार ग्वाल्लेक चिलाउनेमा झडप भएको थियो।
त्यसमा आठ जना घाइते भएका हुन्।
त्यस बेला सडक रोक्ने पक्षकी गौरीलाई डोजरले हुत्याएको थियो। गौरीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको उनका पति जगदीशले बताए। ‘म त डडेलधुरामा एउटा होटलमा काम गर्ने मान्छे हुँ। हाम्रो जमिनमा डोजर नचलाऊ भन्दा डोजरले नै श्रीमती हुत्याएछ’, उनले भने, ‘उनको उपचार गर्न कोहलपुर आइपुगेको छु। डोजरले मान्छे हिर्काउँदासम्मको अवस्था कस्तो भयो होला तपार्इं आफंै विचार गर्नुहोस्।’ धनगढीमा सिटीस्क्यान नभएपछि कोहलपुर लगेर उपचार गराइएको उनले सुनाए।
उक्त घटनापछि स्थानीयवासी त्रसित देखिएका छन्। ‘हामी मिलेर बसेका थियौं। यो घटनाले झस्काएको छ’, धाना जोशीले भनिन्, ‘मैले अपरेटरसँग डोजर नचलाउनुहोला, सहमति नभए झडप हुन्छ भनेको मानेनन्। सबैलाई चोट लागेको छ। गाउँमा त्रास फैलिएको छ।’
सुन्नाखानबाट दुई वर्षअघि सुरु गरिएको सडक निर्माण चिलाउनेसम्म पुगेको थियो। त्यहाँबाट झन्डै ३ सय मिटर दूरीको पार्ससम्म नगरपालिकाले निर्माण गर्न भनेको थियो। तर, तिहारपछि सहमति गरेर मात्र सडक काट्ने सल्लाह भए पनि उपभोक्ता समितिले त्यसअघि नै जबजस्ती सडक काटेको स्थानीयले बताएका छन्। ‘हाम्रो जमिनमा हामीसँग सहमति नगरी डोजर चलाउनु कत्तिको जायज हो ? ’, गोमती जोशीले भनिन्, ‘यो विषयमा सबै पक्षले सोच्नुपर्ने हो।’
अर्का स्थानीय हंशराज जोशीले डोजर नचलाउन, तीन–चार दिनमा सहमति गरेर सडक काट्न भने पनि नमानेको बताए। ‘एक्कासि हाम्रो जमिनमा डोजर चलाएर हाम्रै मान्छेलाई डोजरले हुत्यायो’, उनले भने, ‘जहाँ डोजर चलाइएको छ त्यो देवताको गुठी जमिन हो। त्यसकारण हामीले सल्लाह गरौं भनेका हौं। तर, अर्को पक्षले जबर्जस्ती गर्दा यस्तो भयो।’
नगरपालिकाले सडक निर्माण योजना भने राखेको छैन। ‘योजनै त थिएन, पहिला काटिसकेको सडकमा २५०–३०० मिटरका लागि कुनै शीर्षकबाट बजेट मिलाउने भनेर सडक काट्न भनिएको हो। तर, विवाद देखिएपछि तिहारलगत्तै दुवै पक्ष बसेर सहमति गरी मात्रै अघि बढ्ने सहमति भएको थियो। अचानक कसरी सोमबार डोजर चलेछ, थाहा भएन।’ उनका अनुसार नगरपालिकामा दुवै पक्ष बसेर तिहारपछि नगरपालिकाले अनुगमन गर्ने, त्यसपछि सडक काट्ने सहमति भएको थियो।
सडक पार्ससम्म पुर्‍याउने सहमति भएपछि मात्रै काम सुरु गरिएको निर्माण गर्ने पक्षले जनाएको छ। ‘हामीले आइतबार जग्गाधनीसँग छलफल गर्‍यौं। उनीहरूकै रोहवरमा काम सुरु गरेका हौं’, स्थानीय दिनेश जोशीले भने, ‘सडक निर्माण गर्दा उनीहरूले डोजरमा एक्कासि ढुंगामुढा गरे। त्यसपछि झडपको स्थिति आएको हो।’
नगरपालिकासँग सहमति गरेरै सडक काट्न थालिएको निर्माण समितिका अध्यक्ष केशवदत्त जोशीले बताए। ‘पार्समा दुईतिरबाट सडकको काम भइरहेको छ’, अध्यक्ष जोशीले भने, ‘हाम्रै सडकमा मात्रै अवरोध हुँदा हामीलाई समस्या भएको छ।’
मेयर नरेन्द्रसिंह थापाले दुवै पक्षलाई सहमति गरेर मात्रै सडक काट्न आग्रह गरिएको बताए। ‘ग्वाल्लेकको त्यो सडक निर्माणका विषयमा हामीले दुवै पक्षलाई सहमति गरेर काट्न भनेका थियौं’, मेयर थापाले भने, ‘तर, सहमति नभएरै सडक काटिएको रहेछ।’
दुई पक्षबीच लामो समयदेखि रहेको विवाद सोमबार झडपमा परिणत भएको प्रहरीले जनाएको छ। डोजर चालक किशोर बोहरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। ‘चालकलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेका छौं’, डीएसपी डिल्लीनारायण पाण्डेले भने। सडक निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेतर्फका केशवदत्त जोशी र सडक रोक्नुपर्छ भन्ने दुर्गादत्त जोशीलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको उनले सुनाए।
उपभोक्ताको काममा डोजर
उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गर्ने भनिएका सडकमा डोजर र स्काभेटर प्रयोग भइरहेको छ। स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाबले उपभोक्ता समितिको अवधारणा आए पनि मेसिन प्रयोग भइरहेको हो। ‘गाउँमा सडक निर्माण हुँदै छन्। सबै ठाउँमा मेसिन प्रयोग भएको छ’, सुर्नया गाउँपालिका ६ का डम्मरदत्त अवस्थीले भने, ‘हामीलाई गाउँमा रोजगारीको अवसरै छैन। अझै भारत जानुको विकल्प छैन।’
पुरुषजति रोजगारीको खोजीमा बाहिर गएपछि गाउँमा महिला मात्रै रहेका सिगास गाउँपालिकाका सुरेन्द्र साउदले बताए। ‘सडक निर्माणजस्ता ठूला योजनामा मेसिनकै प्रयोग हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले पुरुषहरू रोजगारीका लागि भारत पसेका छन्। गाउँमा विकास निर्माणका काममा महिलाकै सहभागिता छ।’
१ करोडसम्मका काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाउने प्रावधान छ। ‘मानिसले काम गर्दा धेरै समय लाग्छ। गाउँमा सडक पुगेपछि रोजगारीका अन्य उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ। त्यसैले सडक निर्माण गर्दा मेसिनको प्रयोग गर्नुपरेको हो’, पञ्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले भने, ‘सडक विकासको मुख्य आधार हो। यसको पहुँच सबै ठाउँमा छिटो पुर्‍याउन मेसिनको विकल्प छैन।’
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै सडक
स्थानीय तहमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरीकनै सडक निर्माण भइरहेका छन्। यस्ता सडकले प्राकृतिक विपद् निम्त्याउन सक्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा बैतडीका कार्यक्रम अधिकृत तेजप्रसाद पाण्डेले बताए। ‘विकास निर्माण गर्दा विपद् व्यवस्थापनका कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। अहिलेजस्तो डाँडा चिरेर सडक निर्माण गर्ने हो भने यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ’, उनले भने, ‘अहिले विकासका लागि गरेको खर्चको दोब्बर हिस्सा विपद् व्यवस्थापनमा लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’
डोजर चालकलाई जता सजिलो लाग्छ त्यतैतिर सडक जाने गरेको स्थानीयको आरोप छ। ‘नियमले सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो’, दशरथचन्दका इन्जिनियर जयसिंह बोहराले भने, ‘तर, स्थानीय तहले निर्माण गर्ने साना सडक हुन्छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमै एक वर्ष जान्छ। यसकारण समयमा काम हुँदैन।’ स्थानीय तहले निर्माण गर्ने सडकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नहुने गरेको उनले सुनाए।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एभिन्युज टेलिभिजनको भिडियो :
डोजर विकासले निम्त्यायो विनाश : मापदण्डविपरीत सडक बनाउँदा दर्जनौं बस्ती जोखिममा